Axmed Madoobe oo lagu eedeeyey in heshiis uu la saxiixday mucaaradkii Beeshiisa & War cusub
May 22, 2020 Mahad Jama 8
NAIROBI(P-TIMES)- Danjiraha Midowga Afrika ee Soomaaliya Amb Francisco Madeira oo kamid ahaa Madaxdii hadallada ka jeedisay kulankii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimo ay kamid yihiin xaalada Siyaasadeed ee Jubbaland.
Danjiraha ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu kaliya heshiis la gaaray mucaaradka kasoo jeeda Beeshiisa, hayeeshee loo baahan yahay in dhamaan Beelaha dega deegaannada Jubbaland uu xal la gaaro.
Danjiraha Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira waxa uu sheegay in uu xaqiijinayo in weli la boohan yahay in lasii ambaqaado dib u heshiisiin dhab ah oo dhamaan deegaannada Jubbaland ka hirgasha lana qanciyo dhamaan Xubnaha mucaaradka ah.
23-kii Bishii April ee sanadkaan ayaa waxaa Magaalada Nairobi ee dalka Kenya heshiis ku kala saxiixday hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Xubnihii isbedel-doonka Jubbaland ee diidanaa doorashadii ka dhacday Magaalada Kismaayo, waxaana soo dhaweeyay heshiiskaas Beesha Caalamka.
Ma Soomaaliya oo dhan ayaa dib u heshiisiin u baahan, mase reer Jubaland ayaay gooni ku tahay dib u heshiisiintu?!
Waase kuwee reer Jubalandka u haahan dib u heshiisiinta?
Ma qolooyinka uu Amiin Jeesoow oo Beledwene ka soo jeedo hor boodayo ee Xamar ka qeeylinaya iyo Axmed Madoobe baa?
Ma Farmaajo iyo Axmed Madoobe baa?
Ma Mareexaan iyo Absame oo ah, labada qole ee Jubaland ugu Tunka weyn baa, oo ma Colaad Qabiil baa ka dhaxeeysa labadaa Qabiil?!
Ma Aniga iyo Axmed madoobe baa?! Kkk
Bal nimakan Mahiiga ah ee meesha ka hadlay ha qeexo Cidda aay tahay in la heshiisiiyo ee aay colaadu dhex taal!!
Midda Kale Kenya oo aan ognahay in aay tahay cidda heshiisiisay, Axmed iyo Beeshiisa uu Mahiigahan leeyahay wuu la heshiiyey, Soow AMISOM kama tirsana?!
Markaa haddii uu qalad leeyahay heshiiskani, Cidda ka shaqeeysay soow wadan AMISOM ka tirsan ma aha oo ma habbooneyn in aay AMISOM is wareeysato oo aay saxdo haddii uu qalad jiro, inta aaysan tagin fagaara yaasha caalamka?!
Walaweyn waa kaa caqligeedu!kkk Dad muransanaa haday heshiiyaan goormay wax laysku tuhmo & ceeb noqotay? Xitaa haday isku qabiil yihiin hada iyagaa heshiiyay. Kadib-na dadka kale ee dhulkaa la degan bay la heshiinyaan. Khalad waxay geli karaan markay ku heshiiyaan dhibaataynta dadka dhulka kula dhaqan. Arinkaana caday looma hayo. Waxaa warkan suuqa siyaasada kula soo qunbacday caruurta uu Farmaajo masruufo P-times tuur tuurkii baa soo gaadhay!kkk kkk kkk
Waa ku salaamay Marwo marka hore. Waxaan arkay adoo Farmaajo taageeraya ee maad ka joogi.kkk Walaynaan sidaas isku qabayne. Hadii kala waxaa inaga dhex dilaacaya dagaal hoosaad oday & islaantii!kkk kk kkk
Waxaa la yaableh jemison swan qudbadii dhereeyd ee uu ka jeediyey kalani qaramada midoobay ee eeda dusha looga tuuray farmaajo iyo kooxdiisa ee looga hadlay ciidamadii gedo la geeyey doorashada somalia xiriirka xun farmaajo maamul goboleedyada dawladaha jarmalka mareeykanka faaransiiska in si degdeg ah ==farmaajo wada tashi la sameeyo maamulada,,,, puntland times masoo qaadan taas badelkeed waxeey mashquul ku tahay jubaland iyo puntland ciid wanaagsan ummaddaha muslimiinta ah
HADAAN SOOMAALI NAHAY WELI DHAQANKII REER GUURAAGA AYAA KU DHEX JIRNAA REER HEBEL, LAANDHEERE IWM OON KU DABAQNAY DOWLADNIMO, HADBA KII KURSIGA KU FADHIISTO REERKIISA AYAA GURBAANKA U TUMA OO INTA KALE WAA ISKA MUCAARAD, 1960 – 2020. 60 SANO DOWLADNIMO LAGUMA BARTO WELI MA AYNAAN FAHMIN WAXA LA YIRAAHDO DOWLADNIMO. ADUUNKA NAGA HOREEYO QARNIYAAL AYEY DOWLADNIMADA KU SOO DHEX JIREN WEYNA FAHAMSAN YIHIIN DOWLADNIMADA.
Horta, Madeira waa ninka madaxweyneyaashii hore iyo mucaaradkuba ku dhaliilayeen inuu xilkiisii gudanwaayey markii ciidan Itoobiyaan ah oo aan ka tirsanayn AMISOM aad usoo galeen Somalia. Waxaan qiyaasayaa in finfiniinka dollarka sunta ee Qatar isagana gaaray.
Way iska caddahay in warbixinta loo gudbiyey Golaha Ammaanka ay ahayd mid adag (damning report) oo ku janjeerta Villa Somalia. Ha sugi waayina inuu soo baxo go’aan Golaha Ammaanka oo amraya in laga saaro ciidanka la geeyey Gedo, isla markaana xoogga la saaro la dagaallanka sharka afkaduuban.
Heshiinka Sayid Axmed Islaam shilin-qaateyaasha, waxa la isku haystay wuxuu ahaa doorashada jagada madaxweynaha, ee ma ahayn awoodqaybsiga beelaha Jubbaland. Sayidkuna wuxuu la heshiiyey raggii jagadaas kula tartamayey; qabiilkoodu macne sameynmayo. Qoladiise ku riyoonaysa in waxqaybsigii Jubbaland dib loogu noqdo, wax badan bay gocosho iyo ciilkaambi ku noolaan doonaan.
Xiddig iyo Seeraar, weligay ma arag labo nin oo ka axmaqsan kana macangagsan. NiNkii deyn cunay, beluu ka dibbiray. Dabinka Jubbaland lala rabo waa ka ‘baroor dhiilladu ma dhacsiisana’.
war beryahan dagaal magaline oo waan uxiisaye,dagaalkaaga waan ku xiiso bixi,kkkk,
horta qofka layskama taageero ee farmajo marku wax ummada udan ah sameynayo waan taageeraa,lkn waxkale kuma taageero,lkn kheyre waan taageeraa,runta fiicane,kkk